फोन र म्यासेजको हैरानी पछि दीपक बोल्न बाध्य भए, माओवादी प्रवेश गरेको बास्ताविकता यस्तो ! – Sandes Post
फोन र म्यासेजको हैरानी पछि दीपक बोल्न बाध्य भए, माओवादी प्रवेश गरेको बास्ताविकता यस्तो !
April 2, 2022 449
‘दीपकराज गिरी माओवादीमा प्रवेश’ भन्ने शिर्षकमा बनेको समाचारले अर्का दीपकराज अर्थात फिल्म निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । दिनै भर फोन र म्योसेज ननस्टप आए पछि हैरानी व्यहोर्नु परको हो ।
माओवादीमा प्रवेश भन्ने समाचारको हेडलाइन मात्र हेरेर धेरैले गिरीलाइ सम्पर्क गरेका थिए । सो कुराको हैरानी पछि दिपकले आफ्नो अफिसियल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समाचारको हेडलाईमा मात्र पढेर म्यासेज नगर्न आग्रह गरेक छन् ।
गिरीले भनेका छन्, दीपकराज गिरी माओवादीमा प्रवेश भनेको हेडलाइन मात्रै हेरेर फोन र म्यासेज आएका हैरान बनायो । म कहि गएको छ्रैन, म कुनै पार्टीको हैन सबै पार्टीको हुँ ।
हेर्नुहोस् उनको स्टाटसः
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सिन्धुपाल्चोकका सदस्य समेत रहेका सिन्धुपाल्चोकका युवा नेता दीपकराज गिरी आज माओवादी केन्द्रमा प्रवेश थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निवास खुमलटारमा उनलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।
सोही समाचारमा बनाइएको हेडलाइन कारण कलाकार तथा फिल्म निर्माताले हैरानी व्यहोर्नु परेको थियो । दीपकराज गिरी माओवादी प्रवेश भन्ने शब्दका कारण कलाकार तथा फिल्म निर्माता दीपकराज गिरी हैरानी व्यहोर्नु परेको थियो । सो कुराको खण्ड गर्दै आफु सबै पार्टीको हो र कुनै पार्टीमा प्रवेश नगरेको बताए ।
Prevनुवाकोटका ३ फिटे गोपिले भित्र्याए पोखराकी ६ फिट अग्ली सुन्दरी !
Nextअमेरिकी सेना सहित भारतको लखनउबाट काठमाडौं छिर्यो सेनाको ठूलो जहाज
प्रेमीकालाई चलाउन दिएको मोबाइलमा अर्कै ब्वाइफ्रेण्ड संगको से क्स भिडियो भेटेपछि (भिडियो सहित)
पिडित किशोरीको बयान : ‘म त्यतिबेला निकै दुब्लो थिएँ , उसको झट्काले म कोठाको अर्को भागमा पुगें , त्यसपछि ऊ ममाथि आयो’
उम्मेदवारलाई विष खुवाएको भन्दै चक्का जाम
युवा ज्योतिशले गरे पल र गायिका मिल्ने सन्केत, दुबैकोको बिग्रेको ग्रह अब राम्रो हुँदै मिलन हुने योग छ (भिडियो सहित)